Ndeipi nzira dzakanakisisa dzokuwana backlinks?
Imwe yenzira dzakanakisisa dzekugadzira organic link juice kubva kutsvaga injini ndeyokusika zvakakosha backlinks. Dambudziko nderokuti vazhinji vanoita webhusaiti, uyewo veongororo dze SEO, havazivi nzira yekuwana backlinks zvakasikwa. Zvaunofunga zvinotamba mukati memushandirapamwe wako, asi kunze kwekuti une boka guru revateveri vakavimbika, webhusaiti yako haizomborevi yakakwirira muSERP sezvo ichange isingaoneki kune vashandi venyu vanogona kuuya nehutano hwepamusoro kune yako yepaiti.
Muchikamu chino, uchawana dzimwe nzira dzekushanda dzakakwana dzekuwana zvakanakisisa backlinks kunewebsite yako pasina kusika chero zvinyorwa.
Tsvaga zvataurwa zvebhizimisi rako rekutsvaga uye bvunza backlinks (
Kana iwe wakawedzerwa kune nzvimbo uye zvinyorwa zvako zvakagadziridzwa nemudzidzi mupfungwa, zvino mukana wokuti mumwe munhu ataura nzvimbo yako sekutaridzika yakakwirira. Zvisinei, munguva dzakawanda, havasi kuisa hukama kana vachitaura mumwe munhu. Basa rako nderokuwana izvi zvinotaurwa uye kuvashandura kuti zvive zvakakosha kumashure. Iwe unogona kuzviita kuburikidza nevanowanikwa webhusaiti kana ma bloggers vanotaura bhizinesi renyu pamapeji avo. Kana vakakoshesa nzvimbo yako uye vanofarira hukama hwebhizimisi nemwi, saka vangangodaro vachagamuchira zvaunoda.
Kuti uwane zvinyorwa izvi nezvemasimba ako, unogona kushandisa zvakasiyana-siyana zvishandiso seSemalt Website Analyzer kana Moz Web Explorer. Zvishandiso izvi zvingakubatsira kuti uwane mawebsite akataurwa kwauri. Iwe unogona kutsvaga chimwe chezvombo izvi uchishandisa izwi rechikuru kana zita rechizinda. Iwe unogona kutaura nguva kuti uwane zvataurwa zvekare uye kutengesa data yakagadzirwa muExpcel format.
Unogona kutaurirana nevanemi webhusaiti kana ma blogger avo vakakurondedzera kuburikidza nemamerica kana hutano hwemagariro evanhu.
Unogonawo kubatsirwa kubva kuSemalt Website Analyzer kuwana chero webhusaiti yakasiyana kana boka remasayithi anoshandisa tsanangudzo dzinoenderana nebhizimisi rako.
Tsvaga Wikipedia yakafa uye uwane rusununguko rwemashure
Wikipedia iyo nzvimbo yepamusoro yepawebsite yepasi rose. Ndicho chikonzero kuwana zvakanakisisa zvekare kumashure kubva kune ino inogona kuita zvishamiso. Iwe unogona kunyengedza urongwa uye uwane hutano hwakafa kuti uhugadzire nehutano hwakakosha kubva pawebsite yako. Sarudza chete zvinyorwa izvi ndezvenhamba yako. Kana wangowana peji reku Wiki rine zvakakosha kumashoko ako emabhizimisi ane rakaputsika, tsvaga Ctrl + F uye taura wakafa. Kuti ushandise hukama hwakafa newewe, iwe unoda kugadzira kadhi pa Wikipedia, pinda nehurongwa uhwu, svika pane zvakakosha zvinyorwa zvakaputsa zvido, tsvaga pane zvinyorwa zvekugadzirisa uye shandura chibatanisi chakafa newe backlink yako.
Kuzadzisa izvi, enda kumucheto peji uye sarudza chikamu "edit summary. "Pano unofanirwa kutsanangura muchidimbu matanho awakaita uye shandisa bhokiti" iyi ichinyorwa kuchinja "uye" chengeta kuchinja ". Izvozvo zvose, iyezvino Wikipedia ine unhu hunoenderana nehuwandu hwemasimba ako, simudza simba rako rekushandisa pawebhu Source .